Nest wuxuu ka shaqeeyaa alaabada cusub ee amniga iyo heerkulbeeg ka jaban | Wararka IPhone
Nest wuxuu ka shaqeeyaa alaabooyinka cusub ee amniga iyo heerkulbeeg ka jaban
Jose Alfocea | | Tartanka, kuwa kale
Nest, oo ah shirkad ay xilligaa heshay Alphabet, oo ah shirkadda hadda waalidka ah ee Google, ayaa sii wadaysa inay u shaqeyso guryaheena u badal guryo run ah oo caqli leh mustaqbalka, hada, iyo ka dib markii ay dhowaan ku fiday dalal kala duwan oo Yurub ah sida Austria, Italy, Belgium, Germany ama Espana, hadda wuxuu ku shaqeeyaa ujeedadaas oo ah kordhinta joogitaankeeda, wuxuuna ku sameeyaa laba jiho.
Badeecadeeda flagship, heerkulbeega buulkaIn kasta oo ay u taagan tahay keyd muddo-dheer ah, haddana weli qaali ayey ku tahay dad badan, sidaa darteed shirkaddu waxay ku shaqeysaa qaab jaban. Dhanka kalena, kor u qaado alaabadaada amniga guri caqli badan, intaad diyaarinayso alaab cusub. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato, wax walba oo hoose ayaan kuu sheegayaa.
1 Maxaa ku cusub amniga Nest
2 Heerkulbeeg ka raqiisan
Maxaa ku cusub amniga Nest
Sida laga soo xigtay hadaabacay websaydhka Bloomberg oo u sheegaya il aan la aqoonsan, Nest wuxuu ku diyaarinayaa warka xiisaha leh kaydka alaabada ee guriga caqliga leh ee aan bilaabi doonno inaan aragno deyrta soo socota. Gaar ahaan, shirkadda ay leedahay Alphabet Wuxuu haddaba ka shaqeynayaa heerkulbeeg ka jaban, nooc casriyeysan oo kamaraddiisa amniga ah, aaladda digniinta guriga, iyo albaabka dijitaalka ah.
Waxaan ku bilaabi doonnaa noocyada wax soo saarka ee amniga guriga ee Nest iyo gaar ahaan, by Nest Cam Gudaha. Nooca hadda jira ee sheygan, oo la bilaabay sanadkii hore, wuxuu awood u leeyahay in lagu ogaado joogitaanka dadka qol, hase yeeshee, shirkaddu waxay ka shaqeyneysaa qaab cusub oo awood u yeelan doona cadee dadka qolka ku jira, taasi waa, in la ogaado dad gaar ah, oo kaliya maahan inay jiraan ama aysan jirin dad ama tiradooda. Noocan cusub ee ah Nest Cam Indoor waa la iibin karaa mararka qaar deyrta soo socota.
Anaga oo ku sii soconayna qaybta amniga, waxaan si buuxda u galaynaa warka maxaa yeelay Nest ayaa diyaarinaysa aaladda digniinta guryaha ee casriga ah. In kasta oo aynaan aqoon faahfaahin aad u tiro badan, haddana waxaan ognahay inay lahaan doonto hawlo ka horumarsan oo caqli badan nidaamka digniinta hadda jirta, iyo inay ka koobnaan lahayd cunsurro iyo dareemayaal kala duwan oo loogu talagalay daaqadaha iyo albaabbada. Intaas waxaa sii dheer, waxaa lagu maamuli karaa barnaamij ka socda taleefannada casriga ah oo u oggolaanaya adeegsadaha inuu fursad u siiyo dadka meel kasta oo ay joogaan. Nidaamka digniinta cusub ayaa sidoo kale la heli karaa dayrta.
Cusboonaysiinta labaad waxay noqon doontaa gambaleel dijitaal ah Waxaa sidoo kale laga maamuli karaa barnaamij ku jira taleefanka casriga ah, kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay ka isticmaali karaan meel kasta oo guriga ka mid ah, sidoo kale u oggolaanaya gudbinta maqalka iyo muuqaalka. Badeecadani waxay imaan kartaa horaantii 2018, oo ay weheliso sheeko cusub oo soo socota, heerkulbeeg ka jaban.
Heerkulbeeg ka raqiisan
Nest thermostat wuxuu u taagan yahay keyd dhaqaale muddo dheer, si kastaba ha noqotee, si loo bilaabo, qiimaheeda sare (249 euro) waa bareeg inta badan. Sidaa darteed, shirkaddu way shaqeyn lahayd heerkulbeeg cusub oo jaban in uusan arkin iftiinka ilaa sanadka dambe.
Waa in aynaan ka fikirin heer-kul-qiime-jaban. Ilo-wareedka Bloomberg ayaa xaqiijiyay taas qiimihiisu hoos ayuu uga dhici lahaa laba boqol oo yuuro, laakiin waa inaanan sugin intaa ka badan.
Sidoo kale, qiimo dhimistaan ​​waxay lahaan laheyd qiimoHaddii aad ii oggolaato shaqo-dhimista, waana in tayada alaabta la hurayo, tusaale ahaan, moodeelka cusubi ma lahan kuwa geesaha macdanta ah ee u muuqda kuwo aad u wanaagsan.
Shaki kuma jiro in hoos udhaca qiimaha ee heerkulbeegga Nest (ama soosaarida nooc ka jaban) ay noqon doonto mid wanaagsan in la kordhiyo iibka isla markaana la dhex galo tiro badan oo guryo ah, hadda, miyay noqon doontaa qiimo dhimis sida ugu yar ee adeegsadayaal badan dukaamaysi
Dhanka kale, yaanan ilaawin inaan la kulanno warar xan ah, oo ay weli jirto wado dheer oo loo maro in warkan uu bilaabmo inuu yimaado, sidaas darteed wali waxaan arki karnaa isbadalo muhiim ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » kuwa kale » Nest wuxuu ka shaqeeyaa alaabooyinka cusub ee amniga iyo heerkulbeeg ka jaban
Facebook wuxuu bilaabayaa Tilmaamaha Safarka oo ay soo jeedinayaan saaxiibbadeen
Twitter-ka loogu talagalay macruufka ayaa ku daraya shaqooyin cusub oo lagu maareeyo kaydinta barnaamijka